Khilaaf Xoogan oo Soo Kala Dhex Galay Jwxo-shiilada iyo Iyada oo Laga Yaaban Yahay in Qaarkood ay Iska Xaadiriyaan Kaalinka 5aad – Rasaasa News
Jul 14, 2009 Jwxo-shiilada
Qormadan oo aad u xiiso badan oo ku saabsan khilaaf qarsoomi waayey oo soo kala dhex galay labada nin ee ugu muhiimsan kooxda Jwxo-shiilada, ka dib kolkii uu mid ka mid ah lugta ku martay nin caan ka ah dhulka Somalida Ogadeeniya, oo ka tirsan Baarlamaanka Kaalinka 5aad, ahna ninkii soo saaray kalmadii kadeedka dadweynaha ee IS-fashili.
Warar dhab ah oo la isla dhexmarayo ayaa waxaa ay sheegayaan in uu khilaaf xoogan soo kala dhexgalay kooxda Jwxo-shiilada, khilaafkan oo ka dhex bilowday labada nin ee ugu qabqablaysan kooxda Jwxo-shiilada.
Kooxada Jwxo-shiilada ayaa waxaa ay yihiin saddex qaybood oo kala socda laakiin hal magac wada sheegta waxayna kala yihiin; Jwxo-shiil, Qaaxo iyo Ina Dhuubo oo dhinac ah iyo Maadey iyo Diirane oo dhinac ah. Jwxo-shiil oo aan isagu ahayn nin hore Jabhad ahaa, balse Eebe amamrkii uun ku soo dhex galay Jwxo, ayaa ah nin u dhaxeeya saddex laba dhardhaar oo is haysta sida uu horeba isaga laftigiisu u cadeeyey [Jwxo-shiil, waxaa uu u dhigmaa madaxweynenimada uu sheegto Daahir Riyaale] sanadkii 2007, isaga oo beeshiisa ku xan qarsaday reer Cabdile iyaga ayaa is haysta anigana iima ogola in aan ka dhex baxo.
Waxaa meesha ku hayey Jwxo-shiil labo nin waa ninka la yidhaahdo Ina Dhuubo iyo Mr Qaaxo, oo iyagu ah labada ku xigeen ee Jwxo-shiil, labadan nin uma ogola in uu Jwxo-shiil in uu cid kale amar ka qaato ama uu wax waydiiyo. Waxyaabaha dhacaya oo dhan iyaga ayaa inta badan masuul ka ah, marka laga reebo Jwxo-shiil oo isaga laftigiisu ku hoos wata arimaha isaga iyo beeshiisa u gaarka ah oo aad moodo in labada qolaba uu rabo in uu ka gacan sareeyo.
Qolada saddexaad ayaa waxaa ka mid ah Maadey iyo Diirane oo kolkii hore ahaa rag ku hoos gabada Dr. Dolal, balse hal mar uun laanta indhaha kagag sii daayey Dr. Dolal iyo saaxiibkood Eng Salaxdiin. Waxaana la sheegayaa sababta ay uga soo go,een Dr. Dolal in ay ahayd iyaga oo la hunguri galiyey oo Diirane loo sheegay in uu noqon doono ninka badali Jwxo-shiil maadeyna Diirane ayuu wax walba uga dambeeyaa.
Hadaba, iyada oo ay arinta kooxda Jwxo-shiil ay tahay mid sidaas ah, oo korka uun laga wada socdo, laakiin uusan jirin wanaag iyo xeer Jabhadeed oo lagu wada socdo qolobana ay qolo gaadayso, ayaa waxaa soo baxaya arimo keeni kara in qaarkood ay ka xaadiraan Kaalinka 5aad.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa uu khilaaf soo kala dhex galay labada nin ee ku amar ku taagleeya kooxda Jwxo-shiilada oo ah Indh Dhuubo iyo Mr Qaaxo. Waxaa la sheegayaa in uu Ina Dhuubo oo ah nin ay balwadi dilootay kolkii la ogaaday in uu yahay ragii ka dambeeyey dilkii Dr. Dolal, ayaa waxaa la joojiyey lacagihii uu ku qayili jiray iyo waliba saaxiibtinimadii uu ku haystay bulshada dhexdeeda, waayo saaxiibkiisa ugu dhaw waxaa uu ahaa nin na loogu sheegay Ilka Case oo ay ilmo adeer ahaayeen Dr. Dolal, ninkaas oo kolkii uu ogaaday lugtii uu ku lahaa Ina Dhuubo dilka Dr. Dolal uu xidhiidhkii u gooyey.
Waxaa kale oo uu waji ka waayey bulshadii habeenba guri gayn jirtay ee qaadka iyo qadada siin jirtay, waxaana qasab noqotay in uu qol isku soo xidho. Waxaa sida la sheegayo miciin u noqday Cabdi Ganaf oo ah nin ka tirsan baarlamaan ku sheega Kaalinka 5aad, horena kadeed xoog leh u baday bulshada Somalida Ogadeeniya Cabdi Ganaf waa nin Jwxo-shiilo ah oo isagu ceeb ma laha, wax kasta oo uu yahayna waxaa ku jecel Jwxo-shiilo.
Ina Dhuubo, waxaa uu sheegtaa in uu yahay ku xigeenka 2aad ee Jwxo-shiilada, Cabdi Ganaf waa nin ka tirsan Baarlamaanka Kaalinka 5aad, waxaana lagu wada qayilaa hal qol, Ina Dhuubo shacabka waxaa uu u sheegaa hebel waa dabo qoodhi, Hadaba dadweynow arintaas maxaad ku xugminaysaan?.
Ina Dhuubo dhibaato ayaa haysata, waayo waxaa uu ku xidhan yahay Qol cid ah wax uu saaxiib ka dhigatan waa uu u baahan yahay, wax kasta oo la weydiistana wuu ogol yahay, marka anigu waxaan qabaa dambi ma leh nin baahani.
Arintan waxaa aad uga xumaaday Mr Qaaxo, oo dhawr goor u sheegay Ina Dhuubo, in uu arinta jooji, hadii ay dadweynuhu ogaadaan waxaa la ogaan wax walba oo aan nahay, ceebo badan oo aan hore u galayna way soo bix, Eega ayeynu la,a nahay meel aynu ku soo kaadino ee Abaanow ha ina jiif tirin.
Ina dhuubo wuu cidloonayaa oo oo meel uu cag dhigo ma haysto, xitaa Aroosyada wuu ka caagay cawaysina haba sheegin, Cabdi Ganafna cidlaa u gaysay. Hadaba Islaan Jwxo-shiilo ah ayaa wiilkeed ah ku tidhi hooyo aan kuu duceeye Makhaayad ka samayso qolkii ay Jaaliyadu lahayd oo hore loo xidhay si ay u helaan Jwxo-shiilada meel ay fadhiistaan. Wiilka meesha furtay ma jeclaan jirin Jwxo-shiil, laakiin habaarka hooyadii ayuu dhaafi waayey isaguna waa uu ku ka deedan yahay [Qormo gaar ah ayeynu ku soo qaadan wiilka Jaaliyada Makhaayada looga dhigay]. Baryo kolkii uu yimid Ina Dhuubo ayaa arkay dad kale oo imanaya, Makhaayada laftigeedii ayuuna isku aamini waayey wuxuuna dib ugu noqday Qolkii cidlada ahaa iyo Cabdi Ganaf.
Mr. Qaaxo, oo isagu la nool Caruur badan oo uu dhalay iyo Afadiisa oo aan aad u dareemaynin ciqaabta uu ku jiro Ina Dhuubo, ayaa furka ku tuuray oo yidhi waxaan kaa saarayaa Jwxo-shiilada, Ina Dhuubo laftigiisu waa naf la caari waana nin afxumo badan, wuxuuna u sheegay Mr. Qaaxo in uu yahay nin Duq ah oo waliba xanuun la il daran uuna ka caydhin doono Jwxo-shiilada. Xaalada labada magalooti ayaa ah [laba qaydhiinka ku heshiin weyday bisaylka kuma qayb sato], waxaana joogsaday xidhiidhkoodii iyaga oo aan awal horba xidhiidh la lahayn kuwa iyaga iska garabsaday, Waxaa kale oo la sheegay in Jwxo-shiil oo ku dhuumanaya Sibi in uu thuray u diray Mr. qaaxo oo uu u sheegay in hadii uusan ka hadhin wax ka sheega xidhiidhka Ina Dhuubo iyo Cabdi ganaf in uu caydhin doono.
Hadaba, arinta Jwxo-shiilada waxay joogtaa xaaalka labdii tuug ee is khayaamay ee intay guriga u soo dhaceen uu mid ka mid ah daaqada gacanta ka ritay deedna la gooyey, kolkii laga gooyeyna iska adkaystay ee hoosta gashaday ee saaxiibkii ku yidhi war labada gacmood gali daaqada dahab baa ka buuxee, deedna labdii gacmoodba laga jaray.